पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीको एकल निर्णयका कारण विवादित भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा थपिए सदस्य - Everest Dainik - News from Nepal
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीको एकल निर्णयका कारण विवादित भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा थपिए सदस्य
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीको एकल निर्णयका कारण विवादित
काठमाडौं, पौष २१ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
यसअघि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एकल निर्णयका आधारमा सदस्य नियुक्ति गरेपछि अख्तियारले पत्र काटेको थियो । यही विवादका कारण विगत नौ महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।
याे पनि पढ्नुस अस्पतालमा दुई नयाँ परीक्षण शुरु
को को भए नयाँ सदस्य ?
मन्त्रीपरिषदको बैठकले ६ जना सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त सदस्यहरुमा डाक्टर तारा मानन्धर, डाक्टर आरती शाह, डाक्टर अनु कुशवाह, डाक्टर सिरता घिमिरे, दिनेश कोइराला र सुमिता रिमाल रहेका छन् ।
संचालन समितिमा नयाँ सदस्य आएसंगै अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको अस्पतालका अध्यक्ष डा. प्रकाश न्यौपानेले बताउनुभयो ।
याे पनि पढ्नुस अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन गर्न माग
ट्याग्स: bharatpur cancer hospital, BP Koirala memorial cancer hospital, Khagraj Adhikari